PKR polls - Zaid bags4nominations, Azmin 3
Nokia Reaches Out to Developers, Now Crucial to Company's Success
Sultan bersama Tok Guru di Masjid Muhammadi hari ini
Would You Be Happy WithaPhone That Just Calls and Texts? [Question]
Zunar's new book 'Cartoon-o-phobia' out soon
Source_Jews and Islam, People of the book, Two books look at
၃ ဘာသာ ညီနောင်မှပေးသော ရွှေမြန်မာအတွက် အသိနဲ့သတိ တရား
Posted: 16 Sep 2010 11:28 PM PDT
"Utusan Malaysia terus berkempen untuk memfitnah pemimpin Pakatan Rakyat, khususnya DAP dengan dakwaan yang tidak berasas serta sindiran dengan tujuan meracuni minda pembaca dan menyemai benih-benih kebencian perkauman," katanya.
Katanya, parti itu sedang mempertimbangkan tindakan undang-undang ke atas Utusan Malaysia "demi menjaga nama baik mereka".
Dalam laporannya Selasa lalu, akhbar itu memetik bekas naib presiden PKR, Mohd Zahid Md Arip yang melabelkan DAP sebagai "hiprokit" kerana lambat membidas pembunuh Sosilawati dan tiga yang lain.
"Kerajaan BN begitu megah dengan situasi jenayah di negara ini yang didakwa suatu ketika begitu tinggi tetapi berjaya dikurangkan mengikut perangkaan yang mereka bekalkan," katanya.
"Ia percubaan menjijikkan oleh akhbar milik Umno untuk memperli dan mendakwa dalam laporannya bahawa suspek pembunuh itu adalah ahli seumur hidup DAP tanpa merujuk atau menyiasat tuduhan itu terlebih dahulu," katanya dalam kenyataan akhbar hari ini.
"Jenayah adalah tetap jenayah dan malah Umno juga pernah mempunyai pemimpin yang didapati bersalah kerana membunuh," kata Pua.
Sambil menyifatkan laporan Utusan Malaysia itu sebagai "tidak beretika dan cubaan jahat bagi memfitnah DAP", Pua berkata akhbar itu bertujuan meniupkan semangat kebencian perkauman di kalangan pembaca Melayu.
"Di sebalik itu, Perdana Menteri, Datuk Seri Najib Abdul Razak berulangkali mempertahankan Utusan Malaysia.
"Pada 18 September tahun lalu, beliau pada majlis berbuka puasa di Kompleks Percetakan Sri Utusan, memuji akhbar itu kerana laporannya yang 'beretika dan tidak berat sebelah'," kata Pua.
"Kegagalan Perdana Menteri untuk bertindak bukan sahaja bermakna kelulusan bagi Utusan untuk terus menyerang DAP dan Pakatan Rakyat, tetapi juga bercanggah dengan matlamat 1Malaysia yang diterajuinya," katanya. -mk
Posted: 10 Sep 2010 02:51 PM PDT
Posted: 17 Sep 2010 04:32 AM PDT
Posted: 16 Sep 2010 04:30 PM PDT
Posted: 17 Sep 2010 02:49 AM PDT
Foto oleh Topeng Perak Unmasked's
Posted: 10 Sep 2010 07:00 AM PDT
I'm an RSS junkie, and while I realize that not all of the world's problems can be solved using RSS, for many of us, more efficient use of our RSS readers can haveabig impact on our overall productivity. As Google Reader seems to be one of the more widely-used RSS readers and is the that one I currently use, I thought it would beagood idea to share some tips for getting the most out of it.
You can blast through your feeds withafew simple keyboard shortcuts that allow you to quickly move around without slowing down to reach for the mouse or the touchpad. It also seems that some features don't really haveaclick-able counterpart, so the only way to access them is through the keyboard shortcuts. You can getalist of the available keyboard shortcuts from the Google Reader help page, but here areafew of my personal favorites that I use most frequently:
? – getalist of keyboard shortcuts
j – move to the next item in the feed
k – move to the previous item in the feed
<space> – page down
<enter> – open or close an item
v – view original post
r – refresh feed
For really serious reading, you'll want to go into full screen mode and use all of your available screen real estate for reading feeds. In full screen mode, you getasimple window showing the current feed with no additional clutter. You can navigate using the navigation shortcuts above, in addition to some shortcuts that are specific to using full screen mode:
f – enter or exit full screen mode
<shift>+u – show pop-up navigation menu to change feeds
Ditch the Home Page
While the home page has some interesting things like tip of the day and recently read items, if your goal is to maximize your productivity and efficiency, you should set your landing page to something else. I have all of my most important feeds inasingle folder named "Critical" and I start there. You can change your start page by going to Settings -> Reader settings -> Preferences -> Start page, and select from any folder that you have created, or fromaselection of other pages (All items, Starred items, etc.)
I make extensive use of folders asaway to group and prioritize my feeds. They have become even easier to use after the recent addition of the rename folder functionality. The feeds that are most important located at the top of my navigation window. The order of the folders denotes their importance to me, but this shifts aroundabit depending on my current projects. I simply drag the folders around within the subscriptions navigation pane to reorder them.
I also group things into folders based on projects or context. For example, I usually put my work-related feeds intoacouple of folders grouped by topic that I can easily get through without being distracted by personal items. Keep in mind that you can also click onafolder and navigate through all of the posts within that folder across all of the feeds, so you can get through the folder more quickly than if you are navigating the individual feeds. Asaresult, I sometimes put critical feeds in multiple folders (critical folder and project folder) so that I can glance at it when I land on my start page of critical feeds or when I'm browsing through the project folder. Reading an item in one folder also marks it as read in any other folder, so you don't have to worry about duplication.
The trends page is surprisingly interesting and useful. You can find it in the left-hand navigation pane, or with this shortcut combination: g then <shift>+t. While you can get some interesting insights into which feeds you really read, when you read them and what you clicked, the real value is in pruning your feeds. Takealook at the frequently-updated feeds section of the subscription trends; these are the high volume feeds in your reader. Now, which ones do you really still read and which ones have the zero percent read rating? You can unsubscribe from the dead weight by clicking the conveniently-located trash can, and it won't take you long at all to reduce the clutter.
What are your favorite tips for using Google Reader?
Posted: 16 Sep 2010 03:00 PM PDT
Posted: 17 Sep 2010 01:17 AM PDT
Posted: 16 Sep 2010 11:27 PM PDT
Posted: 17 Sep 2010 10:36 AM PDT
Mr. PM, why are you not honouring your own 1Malaysia goal that is to make Malaysia more vibrant, more productive and more competitive – and ultimatelyagreater nation:anation where, it is hoped, every Malaysian perceives himself or herself as Malaysian first, and by race, religion, geographical region or socio-economic background second...?
If you cannot declare yourself as Malaysian first, Malay second, you are not fit to be PM of 1Malaysia!
Posted: 17 Sep 2010 09:06 AM PDT
ADUN Komtar Ng Wei Aik yang memfailkan aduan itu di ibu pejabat polis Jalan Patani berkata dakwaan dan laporan yang dibuat oleh naib ketua pemuda PKR Mohd Zahid Md Arip dan Utusan adalah "tanpa asas dan bertujuan memburuk-burukkan DAP".
"Suspek itu tidak pernah menjadi ahli DAP, apa lagi menjadi ahli seumur hidup," kata Ng kepada pemberita. Katanya, sesetengah pihak cuba menjadikan pembunuhan itu sebagai isu perkauman di negara ini.
Utusan Malaysia pada 16 September lalu memetik Mohd Zahid yang melabelkan DAP sebagai "hiprokit" kerana lambat membidas pembunuh Sosilawati dan tiga yang lain.
"Dakwaan itu bertujuan merosakkan imej parti," katanya sambil menambah bahawa pemilihan anggota DAP dilakukan dengan tegas dan ia bukan tempat untuk penjenayah.
Posted: 17 Sep 2010 08:00 AM PDT
Posted: 17 Sep 2010 07:19 AM PDT
Source_Jews and Islam, People of the book, Two books look at the touchy subject of Muslim attitudes to Jews in the Economist
FROM 624 to 628AD, several Jewish clans in the Arabian peninsula joined forces with an Arab tribe, the Quraysh, to make war onarenegade Qurayshi named Muhammad who had had the chutzpah to claim he wasaprophet of God. They lost. Piqued at the Jews for rejectingacreed that—with its dietary laws, ritual circumcision and daily prayers towards (at first) Jerusalem—was so closely modelled on their own, the Prophet Muhammad decreed that they, along with Christians, would henceforth be considered dhimmiyeen under Islam; "protected" as fellow monotheists, but subject toaheavy tax and various other indignities.
For Sir Martin the dhimma restrictions form the conceptual framework, such as it is, of "In Ishmael's House", his history of Jewish life under Muslim rule. He relates how, although they often lived in peace and wealth and sometimes reached the very top posts in Muslim administrations, as dhimmiyeen the Jews remained second-class citizens who never knew when prosperity might give way to pogroms.
By contrast, Mr Achcar's "The Arabs and the Holocaust" looks at it in considerable detail. The book isastudy of the evolving attitudes of four different political streams in the 20th-century Arab world: liberal Westernisers, Marxists, nationalists and pan-Islamists. The picture that emerges, especially in the years before the state of Israel, isacomplex and nuanced one that rewards careful reading.
For instance, Arab Marxists in the 1930s found common ground with the then significant groups of Jewish anti-Zionists. Some Arab nationalists admired Zionism as an example even though they opposed the end result, and the more liberal ones welcomedaJewish national home in Palestine, just notaJewish state. Only the more extreme thinkers embraced the Nazis as enemies of the Jews; most saw them as racist colonialists. Muhammad Amin al-Husseini, the pro-Nazi Grand Mufti of Jerusalem who is the chief bogeyman of many pro-Israel histories, comes across asaweak leader with far less influence than is usually ascribed to him. Even the deep anti-Semitism common in today's Islamist groups like Hamas and Hizbullah was not, he argues, as marked in the early days of the Muslim Brotherhood, founded in 1928. By contrast, Anwar Sadat, the Egyptian president who broke the Arab taboo on peace with Israel and paid for it with his life in 1981, was "a notorious Jew-hater".
Mr Achcar is no apologist for prejudice, and at times harshly criticises what he sees asadecline in Arab intellectualism and good sense. He also rebukes those Arabs who stoke anti-Semitism by blurring the distinction between Jews and Zionists (though, as he points out, Zionists tend to blur it themselves). Unlike Sir Martin, though, he dismisses the Jews' dhimma status—perhapsalittle too hastily—as irrelevant compared with the Arab responses to colonialism, Israel and other geo- political forces.
"The Arabs and the Holocaust" may prove hard going for the casual reader. But it isarefreshing and original study, showing clearly that Muslim anti-Semitism is neither universal, nor inevitable, nor subject to pat explanations.
Jews and Islam: People of the book (economist.com)
The Arabs and the Holocaust by Gilbert Achcar | Book review (guardian.co.uk)
In Ishmael's House: A History of Jews in Muslim Lands by Martin Gilbert | Book review (guardian.co.uk)
The Hamas Charter and PLO Official Statements about Jews (nowpublic.com)
Posted: 17 Sep 2010 06:59 AM PDT
Source_‎(ဗုဒ္ဓဘာသာ+မူဆလင်မ်+ခရစ်ယာန်) ၃ ဘာသာ ညီနောင်မှပေးသော ရွှေမြန်မာအတွက် အသိနှင့်သတိတရား
ခုတလော အွန်လိုင်းပေါ်မှာ ဘာသာရေးကို အခြေခံပြီး ပုတ်ခတ်ပြောဆိုနေကြတာတွေ မြင်တွေ့နေရပါတယ်။ ဒါဟာအင်မတန်မှ အရုပ်ဆိုးအကြည်းတန်စေပါတယ်..။ ကိုးကွယ်မှုဆိုင်ရာဆိုင်ရာတွေမှာ သူ့ခံယူချက် သူ့ယုံကြည်ချက်တွေနဲ့ မြတ်နိုးကိုးကွယ်နေကြတာတွေ ရှိကြပါတယ်။
ကိုယ့်ယုံကြည်ကိုးကွယ်မှုကို ထိပါးပုတ်ခတ်လာတာတွေကို လက်သင့်ခံလို့မရသလို.. အခြားဘာသာတွေကို ပုတ်ခတ်စော်ကားမှု ပြုနေတာကိုလည်း အားပေးအားမြောက်ပြုဖို့ မလိုအပ်ပါဘူး။ အဓိကကတော့. ကိုယ်ကိုးကွယ်ယုံကြည်ရာဖြစ်တဲ့ ကိုယ့်သာသနာရဲ့တန်ဖိုးကို မြှင့်ပေးချင်တယ်ဆိုရင်..
မိမိကိုယ်တိုင်ပဲ မြင့်သထက်မြင့်လာအောင် စွမ်းဆောင်ပေးနိုင်စွမ်းရှိသလို.. နိမ့်ကျအောင်လုပ်မယ်ဆိုရင်လည်း မိမိကိုယ်တိုင်ပဲ နိမ့်ကျသထက် နိမ့်ကျအောင် လုပ်နေသလိုတွေ ဖြစ်နေတတ်တယ်ဆိုတာ သိဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ အဲ့ဒါအဓိကအကြောင်းရင်းပါ။ အချို့တွေက ကိုယ့်သာသနာကိုထိလာရင် အရုပ်ဆိုးအကြည်းတန်စေတဲ့ စကားတွေနဲ့ ပြန်လည်ချေပတာတွေ ရှိတတ်ပါတယ်။ ဒါတွေဟာ သာသနာကို ချစ်နေသလိုလို.. ကာကွယ်နေသလိုလိုနဲ့ နိမ့်ကျသည်ထက် နိမ့်ကျအောင် လုပ်နေတာနဲ့ တူပါတယ်။ ဒါကိုတော့ ဗုဒ္ဓဘာသာတွေအနေနဲ့ အဓိကသိထားဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့တွေဟာ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေပါ။ ဘုရားရဲ့အဆုံးမအောက်မှာ ဘုရားရှင်ရဲ့ဆုံးမစကားတွေနဲ့ လိုက်နာကျင့်ကြံနေကြတဲ့သူတွေလို့ ပြောမယ်ဆိုရင် ဘုရားရှင်ဟာ ကျွန်တော်တို့တွေရဲ့ လက်ဦးဆရာလို့ ဆိုရမှာပါ။ ဒီတော့..
ဘယ်လိုတွေ နေထိုင်ကျင့်ကြံဖို့ သင်ခဲ့လဲ ဆိုတာတွေနဲ့ နေထိုင်ပြုမူပြီး လိုက်နာကျင့်ကြံတတ်ဖို့လိုပါတယ်။ ဘုရားရှင် လက်ထက်တော်အခါတုန်းက..
ဘုရားရှင်ကို ထိပါးပုတ်ခတ်ယုံမျှ မကပါဘူးနော်..
အမျိုးမျိုး လုပ်ကြံသတ်ဖျတ်တာတွေ များစွာပါပဲ..
အဲ့ဒီ့များစွာတွေထဲမှာ ဘုရားရှင် ဘယ်လိုသာသနာပြုခဲ့သလဲ..
ဘယ်လိုမျိုး ပြုပြင်ဆုံးမပေးခဲ့သလဲ ဆိုတာလေးတွေကို မှတ်သားနှလုံးသွင်းဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ဘုရားရှင် ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဟာ သူ့အပေါ်တိုက်ခတ်မှုတွေ.. ဝေဖန်ပုတ်ခတ်မှုတွေ.. လုပ်ကြံသတ်ဖြတ်မှုတွေကို ဒီလိုမျိုး အကြည်းတန်စေတဲ့ စကားတွေနဲ့ ပြန်လည် ချေပရမယ်လို့များ ဟောပြဆုံးမခဲ့ပါသလား..
ဒီလိုထိပါးပုတ်ခတ်လာမှုတွေကို ဒီလိုပဲ မကြားဝင့်မနာသာ စကားတွေနဲ့ ပုတ်ခတ်ပြောဆိုပြစ်ရမယ်လို့များ ဆုံးမထားခဲ့ပါသလား။
ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဟာ ယုတ်ညံ့တဲ့စကားမျိုးတွေ ပြောဖို့နေနေသာသာ..
နှုတ်ကနေ လိမ်လည်ပြောဆိုမှုမျိုးကို တစ်ခွန်းတစ်ပါဒမျှ မပြုမှုခဲ့တဲ့အတွက် သုဂတ ဂုဏ်တော်နဲ့ ရှိခိုးကြည်ညို အပူဇော် ခံထိုက်နေတာပါ။ ဒီတော့..
အားလုံးဟာ ဘုရားရှင်ရဲ့ တပည့်သားတွေပါပဲ..
ဘုရားရှင်ရဲ့အဆုံးမအောက်မှာ ရှင်သန်နေထိုင်တဲ့သူတွေဟာ ဒီလိုမျိုး နိမ့်ကျနေတဲ့စကားတွေနဲ့ ပြန်လည်ပုတ်ခတ်နေမယ်ဆိုရင်.. ဘုရားရှင်ရဲ့ အဆုံးမတွေကိုပါ နိမ့်ကျနေတယ်လို့ ပြောနေတာနဲ့ တူနေပါတယ်။ ဒီတော့ တခြားသူတွေ ဘယ်လောက်ရိုင်းရိုင်း တို့ဗုဒ္ဓဘာသာတွေ မရိုင်းဖို့လိုတယ်.. တခြားသူတွေဘယ်လောက် ပုတ်ခတ်ပုတ်ခတ်..
တို့ဗုဒ္ဓဘာသာတွေ မပုတ်ခတ်ဖို့လိုတယ် ဆိုတာလေး ပြောချင်မိပါတယ်။
ပုတ်ခတ်တဲ့သူတွေကို တဖက်ကပြန်ပြီး တွေးကြည့်မယ်ဆိုရင် သနားဖို့ကောင်းတဲ့လူတွေလို့ပဲ မြင်မိပါတယ်။ ဘုရားရှင်လက်ထက်တော်အခါတုန်းက ဘုရားရှင်ကို အမျိုးမျိုး လုပ်ကြံစွပ်စွဲပုတ်ခတ်ခဲ့တဲ့ ဒေ၀ဒတ္တ၊ ကိုယ်ဝန်ဟန်ဆောင်ပြီး စွပ်စွဲတဲ့ စိဉ္စမာနတို့လိုမျိုး အခြားအခြားသောပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာ..
တကယ်တော့ သနားစရာတွေပါပဲ။ အတိတ်ကံရဲ့အကျိုးပေးတွေကိုက ဘုရားရဲ့အဆုံးမနဲ့ ဆန့်ကျင်ပြီး အတိုက်အခံလုပ်ဖို့ကံတွေ ပါလာခဲ့ရတာပါ။ "ပျက်စီးချိန်တန်လာလျှင် မည်သူကပင် သတိပေးပြောဆို တားမြစ် ဆုံးမပါသော်လည်း နားမ၀င်ဘဲ မိမိလုပ်သမျှ အပြုအမူ အနေအထိုင် အပြောအဆိုများကိုသာ အမှန်ထင်နေတတ်၏" ဆိုတဲ့ အဆုံးမအတိုင်းလို့ပဲ နှလုံးသွင်းရမှာပါပဲ။ "မောဟအမှောင် အားကြီးလာလျှင် အမေပြောလည်းမရ၊ အဖေပြောလည်းမရ၊ နောက်ဆုံး ဘုရားပြောသော်လည်း ရမည်မဟုတ်ပေ"
ဘယ်လောက်ကြီးပဲ ကောင်းမွန်တဲ့လမ်းကြောင်းတွေ ပြောပြပြီးဆုံးမနေပါစေ.. မောဟအမှောင် အားကြီးလာရင်တော့ ဘယ်သူ့ဘယ်သူမှ မကယ်နိုင်ပါဘူး..။ သူ့လမ်းကြောင်းသူ လျောက်နေတယ်လို့ပဲ နှလုံးသွင်းဆင်ခြင်ရမှာပါ။ ဒါကိုမှ ကိုယ်ကသွားပြီး မကြည်ညိုရကောင်းလား.. စော်ကားနေရတာလား ဆိုရင်တော့ သူ့ကိုအမှီပြုပြီး ကိုယ်ပါ အကုသိုလ် များစေနိုင်ပါတယ်။
"လူတစ်ယောက်နဲ့ ပြိုင်ပြီး ငြင်းဆိုပြောဆိုနေတာတွေ.. ဆဲရေးတိုင်းထွာပုတ်ခတ်နေတာတွေဟာ ကိုယ့်အဆင့်ကို သူနဲ့တန်းတူမညီ ညီအောင် လုပ်နေတာနဲ့ တူတယ်"
ဆိုတဲ့ ဆုံးမစကားလေးပါ။ သူရိုင်းတိုင်း လိုက်ရိုင်းရရင် ကိုယ်ပါ လူရိုင်းဖြစ်သွားမယ်ဆိုတဲ့ အတိုင်းပါပဲ။ ကျွန်တော်တို့ ဗုဒ္ဓဘာသာဟာ အဆုံးမအထိန်းကွပ် မရှိတဲ့ ဘာသာမဟုတ်ပါဘူး.. ဘုရားရှင်ရဲ့အဆုံးမအောက်မှာ နေထိုင်ကျင့်ကြံနေကြတဲ့ ဘာသာဝင်တွေပါ။ ဒီတော့ ဘုရားရှင်ရဲ့ အဆုံးမတွေကို မှန်ကန်ကြောင်း ပြချင်ရင်..
အဲ့အဆုံးမတွေကို လိုက်နာကျင့်ကြံနေတဲ့သူတွေဟာ ဘယ်လောက်ထိ အဆုံးမအတိုင်း နေထိုင်နိုင်သလဲဆိုတာနဲ့ပဲ ဖော်ကျူးရမှာပါ။ ငါတို့အဆုံးမတွေက မှန်တယ်လို့ အော်နေစရာမလိုပါဘူး..
မှန်တာနဲ့ထိုက်တန်နိုင်အောင် နေထိုင်ပြနိုင်ဖို့ဟာ ပိုပြီး အရေးမကြီးပေဘူးလား..။
ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီး ဆုံးမခဲ့တဲ့.. "ရဟန်းတို့… သူတစ်ပါးတို့သည် ငါ၏ အပြစ်ကိုဖြစ်စေ၊ တရား၏အပြစ်ကို ဖြစ်စေ၊ သံဃာ၏ အပြစ်ကို ဖြစ်စေ ပြောကြရာ၌ ဤစကားသည် ဤအကြောင်းကြောင့်လည်း မဟုတ်၊ ဤအကြောင်းကြောင့်ကြောင်း မမှန်၊ စင်စစ်အားဖြင့် ဤအပြစ်သည် ငါတို့၌ ထင်ရှားမရှိဟု မဟုတ်သည်ကို မဟုတ်သည့် အတိုင်း သင်တို့ ဖြေရှင်းရမည်"
ဆိုတဲ့ အဆုံးမလေးပါ။ ဒီတော့ ဘုရားရှင်ရဲ့အဆုံးမအတိုင်း ပြန်လည်စဉ်းစားတွေးခေါ်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ကိုယ်ပြန်လည်ဖြေရှင်းပေးရမယ့်သူ.. ဟောပြဆုံးမပေးရမယ့်သူဟာ ကိုယ်ပြောဆို ရှင်းလင်းပြတဲ့အမှန်တရားကို လက်သင့်ခံနိုင်တဲ့ဥာဏ်မျိုး ရှိတဲ့သူလား..
ဒါမှမဟုတ် ကိုယ်ပြောလိုက်တဲ့ စကားတစ်ခွန်းကြောင့် သူ့ရဲ့အမြင်တွေ အတွေးတွေ ပြောင်းလဲသွားနိုင်မှာလား ဆိုတဲ့အကြောင်းကို ဦးစွာစဉ်းစားဖို့ လိုအပ်တယ် ဆိုတာလေးပါ။ ကျွန်တော်ပြောတဲ့အထဲမှာ ဘုရားရဲ့အဆုံးမတွေကို ဒီအတိုင်း ပြီးစလွယ် ဘယ်သူစော်ကားနေနေ လက်ပိုက်ကြည့်နေရမယ်လို့ ဆိုလိုတာမဟုတ်ပါဘူးနော်..
ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာ လက်ခံနိုင်တဲ့သူမျိုးဆိုရင်တော့ ဘုရားရှင် အဆုံးမအတိုင်း ပြောပြဆုံးမပေးပါ.. လက်မခံနိုင်တဲ့သူမျိုးဆိုရင်တော့ ဦးစွာစဉ်းစားချင့်ချိန်ပြီးမှ ပြောဆိုပါလို့ တိုက်တွန်းပါရစေ..။
ဒီအကြောင်းရာလေးကို ရေးရတာဟာ ဘယ်သူ့ဘယ်သူမှ ပုတ်ခတ်လိုပြီး ပြောလိုခြင်းမဟုတ်ပါဘူး။ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်အများစုကို သတိထားပြီး လုပ်ကိုင်ပြောဆိုစေချင်တဲ့ သဘောလေးပါပဲ။ ကျွန်တော်တို့ သာသနာဟာ သူများပါးစပ်မှာတင် လမ်းဆုံးသွားမယ့်ဘာသာမျိုး မဟုတ်ဘူးဆိုတာ သိစေချင်တာပါ။ သူများ နှိမ့်ချတိုင်းလည်း မနိမ့်ကျနိုင်သလို..
သူများ ချီးမွမ်းတိုင်းလည်း သဘောကျနေရမယ့်ဘာသာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တစ်ယောက်ရဲ့ နှုတ်ကထွက်လိုက်တဲ့ စကားတစ်ခွန်း.. ရေးသားလိုက်တဲ့ စာတစ်ကြောင်းဟာ ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးမတွေနဲ့ မဆန့်ကျင်နေဖို့ အဓိကလိုအပ်ပါတယ်။ ဘုရားရှင်ရဲ့ အဆုံးမနဲ့ ဆန့်ကျင်ပြီး လုပ်ကိုင်ပြောဆိုနေမယ့်အစား ဗုဒ္ဓဘာသာ မဟုတ်ဖူးလို့ ပြောလိုက်တာဟာ ပိုပြီးသင့်တော်ပါတယ်။ ဒီလိုမှ မဟုတ်ရင် ကိုယ်ပြောလိုက်တဲ့စကား..
ကိုယ်ရေးလိုက်တဲ့ အရေးသားတွေဟာ ဘုရားရှင်ရဲ့ အဆုံးမတွေကို ဖျက်ဆီးစော်ကားရာ ရောက်နေပါတယ်..။ ဒါ့ကြောင့် ဘုရားရှင်ရဲ့အဆုံးမတွေကို မိမိကိုယ်တိုင် ဖျက်ဆီးနေတဲ့သူမျိုး မဖြစ်အောင် ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ကြပါလို့ အဓိက မှာလိုပါတယ်..။ ဘုရားရှင်ရဲ့သာသနာအတွက် ဘုရားရှင်ရဲ့အဆုံးမတွေကို လိုက်နာကျင့်ကြံခြင်းဖြင့် မိမိရဲ့ဘာသာသာသနာကို စောင့်ရှောက်နိုင်ကြပါစေလို့ ဆန္ဒပြုပါတယ်..။ ကိုယ့်ကြောင့် ကိုယ့်သာသနာ… မနိမ့်ကျပါစေနဲ့…။
ဘာသာတိုင်းမှာ အဖျက်သမား မိစ္ဆာကောင်တွေရှိတယ် သူ့တို့ဖျက်ချင်တိုင်းလည်းမအောင်မြင်ဘူး။ ဒါကြောင့်ဒီနေ့ထိ ဗုဒ္ဓဘာသာ၊ မူဆလင်မ်၊ ခရိယာန်၊ ဟင်ဒူနဲ့ အခြားဘာသာတွေတည်တန့်ခိုင်မြဲနေတာပေါ့။ ဆန့်ကျင်ဖျက်စီးသူတွေသာသေသွားမယ်။ သူတို့ရဲ့လုပ်ရပ်အောင်မြင်မှာ မဟုတ်ဘူး။ သူတို့ယုတ်မာမှုနဲ့ သူ့ဘာသာ၊ သူ့မိဘ၊ သူ့ဆရာ သိက္ခါကိုယ်တိုင်ချနေခြင်းသာဖြစ်တယ်။
မြန်မာပြည်မှာကိုးကွယ်နေတဲ့ဘာသာတိုင်းဟာ တိုင်းတစ်ပါသားတို့ ယူလာတဲ့ဘာသာတွေဖြစ်တယ်။ ကျမ်းဂံအသီးသီးဟာလည်း အခြားဘာသာကိုမြန်မာလိုထပ်ဆင့်ဘာသာပြန်ကြခြင်းဖြစ်တယ်။
ဘာသာပြန်မှာ မူလကျမ်းဂံနဲ့လွဲမှားမှု ပိုတာ လိုတာတွေရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်။ အဲဒီအားနည်းချက်တွေရှာပြီးဘာသာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုပုတ်ခတ်နေကြမယ်ဆိုရင် ဒီတိုင်းပြည်တိုးတက်ဘို့မရှိတော့ဘူး။ သူများနိုင်ငံမှာပဲကျွန်ဆက်ခံကြပေရော့။
လုံခြုံငြိမ်းချမ်းပြီး ခေတ်မီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တဲ့ လူ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ရပ်ကို ထူထောင်မယ်ဆိုရင် တမန်တော်မြတ်(ဆွ)ရဲ့  လက်တွေ့ ကျင့်စဉ်အရ_
ရှိတဲ့သူတွေရဲ့  ခံစား ချက်တွေကို _
သူတို့ရဲ့  ရပိုင်ခွင့်တွေကို ကာကွယ်စောင့် ရှောက်ပေးခြင်း၊
အမှန်တရားနဲ့ တရား မျှတမှုကို ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းခြင်း၊
လိုအပ်ပါက ကိုယ်က အနစ်နာခံခြင်း၊
သူတစ်ပါးရဲ့  အကျည်းတန်မှုတွေကို ဖြည့်ဆည်း ပေးပြီး လောကကြီးကိုအလှဆင်ခြင်း (အီဟ်စါန်)
ဒါမှသာ အရည်အသွေးအမျိုးမျိုးရှိနေကြတဲ့ သူတွေရဲ စွမ်းရည်တွေ ကို ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း (Collective Effort)ဆိုတာ ပေါ်ထွက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုဆောင်ရွက်တဲ့နေရာ မှာ_
ဦးဆောင်သူတွေဟာ IQ ရော EQ ပါ မြင့်မားဖို့လိုပါတယ်။
တစ်နည်းပြောရရင် ဥာဏ်ရည်ဥာဏ်သွေးမြင့်မား ဖို့လိုသလို
ကိုယ့်ရဲ့  ခံစားချက်ကိုဖြစ်စေ၊ သူတစ်ပါးရဲ့  ခံစားချက်ကိုဖြစ်စေ၊ နားလည်တတ်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
အခက်အခဲ၊ အကြပ်အတည်းတွေ၊ ဆန့်ကျင်မှုတွေကြုံကြိုက်ရင်လည်း ဆွဗရ်ကြံ့  ခိုင်ခြင်း တရားထားပြီး ဖြေရှင်း တတ်ဖုိ့လိုပါတယ်။
သူတစ်ပါးကို ရန်လိုမုန်းတီးစိတ်နဲ့ အမြဲမြင်နေလို့မရပါဘူး။
ဘယ်လိုဖြေသိမ့်မှုတွေပေးနိုင်မလဲဆိုတာက အဓိက ကျပါတယ်။
နှလုံးသားရဲ့ခံစားချက်တွေဆို တာ အပြောင်းအလဲ ရှိတတ်ပါတယ်။
ကိုယ့်နိုင်ငံရဲ့  လွတ်လပ်ရေးအတွက် တိုက်ပွဲဝင်ကြတဲ့အခါ လူမျိုးပေါင်းစုံ၊ ခံ ယူချက်ပေါင်းစုံ၊ ဘာသာပေါင်းစုံ ပါဝင်ခဲ့ကြလို့ အောင်မြင်ခဲ့ကြပါတယ်။
ဒါပေမယ့် လွတ်လပ်ရေးရပြီးတဲ့အခါ အဲဒီပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု (Collective Effort) သဘောတရားကို မထိန်းသိမ်းနိုင်ခဲ့ကြတဲ့အတွက် လွတ်လပ်ရေး ရဲ့အနှစ်သာရကို ပြည့်ဝစွာခံစားနိုင်စွမ်းမရှိတာကို တွေ့မြင်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။
အနှိုင်းမဲ့ကိုးကွယ်ရာ မြတ်အလ္လာဟ်က ကမ္ဘာဂြိုဟ်မှာ မျိုးနွယ်စုတွေ၊ လူမျိုးတွေ မတူခြင်းဟာ အပြန် အလှန် အသိအမှတ်ပြုကြစေဖို့ဖြစ်တယ်။
မှတ်ချက် : မူဆလင်မ်တွေအနေနဲ့လည်း_
မြန်မာပြည်မှာ မွေးကတည်း ကသေတဲ့အထိ ကုလားဆိုပြီးအနှိမ်ခံနေရပြီးသား။
သူတို့ဘာသာကို ရစရာမရှိအောင် စော်ကားခံနေရပေမဲ့လည်း သူတို့ခံယူထားတာက သူများရိုင်းတိုင်းကိုယ်ပြန်မရိုင်း၊ သည်းခံနိုင်ခြင်းသည်မွန်မြတ်သာစိတ်ဓါတ်ဖြစ်သည်။
အဲသူတို့အထဲမှာတော့ ဂိုဏ်းကဏ္ဍတွေမတူလို့အချင်းချင်းသာပတ်ပြီး ရန်ဖြစ်နေတတ်မယ် အခြားဘာသာနဲ့ရန်ဖြစ်ခြင်းကိုရှောင်ကြတယ်။
လူနည်းစုဖြစ်နေလို့ အခြားဘာသာလူများစုနဲ့ရန်ဖြစ်ခဲ့ရင်လည်း မူဆလင်မ်ပဲနစ်နာမှာပဲ။
စစ်အစိုးရကနိုင်ငံရေး ပဋိပက္ခလုပ်ရင် မူဆလင်မ်ခေါင်းပုံချလို့လွယ်တယ်။
စစ်အစိုးရပါးစေတွေ သွားပြီး ဗလီတွေမီးရှို့ဖျက်စီး၊ မူဆလင်မ်အိမ်တွေ မီးရှို့လည်းလူနည်းစုမို့ဘာမှတောင်းဆိုပိုင်ခွင့်မရှိဘူး။
မြန်မာနိုင်ငံမှာမွေး မြန်မာပြည်မှာကြီး တဲ့မူဆလင်မ်တွေဟာ လူမျိုးရေးအရ အနှိမ်ခံထားရတဲ့အတွက်ကြောင့် ရွှေဝါရောင်အရေးအခင်းမှသံဃာတော်တွေ၊ တရုပ်-ဗမာ အရေးအခင်းတွေမှာစာနာမှုနဲ့ ကူညီကြတယ်။
အားနည်းချက် ရှိခဲ့လျှင် ခွင့်လွှတ်လျှက်ချစ်လိုက်ပါကွယ်……
စစ်ဘီလူးမင်းလုပ်တဲ့ခေတ်မှာ ပြည်ပသာသနာပြုမစ်ရှန်တွေရဲ့ထောက်ပံ့မှုကို မျှော်ကိုးအားထားနေကြရတာပါ။
မြန်မာစစ်တတ်ဟာ ကရင်ရွာတွေ ဓါးပြတိုက်၊ ဖျက်ဆီး၊ ဘုရားကျောင်းတွေမီးရှို့၊ ကရင်မတွေကို မုဒိန်းကျင့် ရစရာကိုမရှိဘူး။
မုဒိန်းကောင်ဆိုတာ ခရိယာန်နဲ့မူစလင်မ်မဟုတ်ဘူး စစ်ဘီလူးတွေကြီးပဲ။ သူတို့လုပ်ခဲ့တာတွေ သူများကို အိုးမည်းပြန်သုတ်တာ။
စစ်သားဆိုတာလည်း ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဖြစ်ပေမဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာကိုတကယ်နားလည် ကျင့်သုံးနေတာမဟုတ်ဘူး။ မိရိုးဖလာ ဗုဒ္ဓဘာသာတွေ။
ဘုရားရှင်ဟောတဲ့တရားလိုက်နာရင် သူများပစ္စည်း၊ မိန်းမ၊ သားသ္မီးဖျက်ဆီးမှာမဟုတ်ဘူး။
၂) ကျွန်ကုလားတဲ့လား။ စစ်ဘီလူးခေတ်မှာ သူများနိုင်ငံကိုအတိုးအဝှေ့ထွက်ပြီး ကျွန်ခံနေတာ မြန်မာလူမျိုးမဟုတ်ဘူးလား။
မြန်မာလူမျိုးတွေဟာ သူများကြိုးဆွဲတိုင်း လိုက်က နေတဲ့လူတွေမဟုတ်ဘူးဆိုတာ ဒီနေ့သက်သေပြဘို့လိုအပ်နေပါပြီ။
လူမျိုးရေး ဘာသာရေး ပဋိပက္ခတွေကိုဖယ်လိုက်ကြပြီး
လူ့အရည်အချင်း၊ လူ့တန်ဖိုးအသိ အမှတ်ပြုပြီး
အဲဒီဆူးကျိုးတွေကိုဖယ်လို့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာတရားကို အစားထိုးပြီး မိမိတို့၏ နှလုံးသားလေးကို ပြန်လန်းစေပါနော်။
Posted by ရောင်ခြည်ဦး (ဘာသာတိုင်းအတွက် အလယ်လူ)
Posted: 17 Sep 2010 05:17 AM PDT
"Polis percaya kes pembunuhan melibatkan Sosilawati dan tiga rakannya itu telah dapat diselesaikan berdasarkan tindakan yang telah diambil dan bahan-bahan bukti yang telah berjaya diperoleh.
"Kertas siasatan akan dikemukakan kepada Pejabat Peguam Negara untuk dinilai, berkemungkinan minggu hadapan...kita yakin siasatan kita punya bukti yang kukuh," katanya kepada pemberita di Ibu Pejabat Polis Daerah Dang Wangi di sini hari ini.
"Tulang-tulang berkenaan baru dihantar ke Jabatan Kimia, Hospital Kuala Lumpur semalam dan difahamkan ia memerlukan masa sekurang-kurangnya empat hari untuk proses penganalisaan.
"Selepas ujian patologi itu selesai barulah kita dapat menentukan dan mengenal pasti profil DNA serpihan tulang tersebut sama ada ia milik Sosilawati dan tiga yang lain atau bukan," kata Mohd Bakri (gambar).
"Jangan buat andaian bukan-bukan, sebenarnya hasil pengakuan suspek — Sosilawati dan tiga rakannya diikat, dipukul dan ditikam sebelum mayat mereka dibakar dan abunya dibuang ke dalam sungai," katanya.
Posted: 17 Sep 2010 05:12 AM PDT
Source_MKini:"Dialogue among religions vital", by Ronald Benjamin
It has beenarelief that the burning of the Quran has been aborted by Pastor Jones from Florida in the US. The intent if put into action, could have createdadeep cleavage in inter-religous harmony around the world because he has chosen the part of revenge, made worse by the inability to distinguish religion from the actions of the ideological zealots that caused the inhuman and barbaric tragedy of Sept 11.
Taking an extreme attitude in threatening to burn the Quran in order to teach Islamic radicalsalesson, the pastor and his supporters have also shown the ignorance of his own nation's responsibility of global hegemonic dominance that has contributed to the worldwide phenomena of terrorism.
They can't claim to be Christians because Christianity in its social dimension is not an ideological construct butadynamic force of spirituality that discerns and seeks solutions inacomplex world by seeking the truth that makes one free.
That is rooted in love of God and neighbour, where life ethics are an integral part of human rights and adherence to creative reason that is derived from natural law written in the hearts of all human persons.
The understanding of faith today among certain evangelical groups, especially those associated with right-wing politics of the Republican party in the US is the opposite of love of God and neighbour. They are not able see truths in complexity.
Truth cannot be divorced from reality and reality reveals that we live inacomplex world of different religion and nationalities and within these groups there is diversity and complexity of cultures and human thoughts which cannot be divided into simplistic black-and-white groups.
Within the Muslim society, we find individuals and groups that are against an exclusive and extremist brand of religion among their co-religionists and this should be acknowledged. Furthermore it not possible to convert every human being to one's belief and reasoning would reveal that it would be far more beneficial to humanity to work towards common ground when we are faced with conflict due to diverse thoughts and culture.
This is where dialogue among religions is vital, not merely by understanding the beliefs of the other but also seeking out the truth and exposingacomplex web of deception and oppression made visible by power play and structures that cause misery to millions – that is one of the principle causes of terrorism.
This should be the focus instead of hijacking the whole world with the threat of burningareligious book that is sacred toareligious community.
Therefore enhancing human dignity should be the prime concern of religion through the love for God and neighbour that is beyond forms, rituals, identity and ideological predispositions. The love for God and neighbour would always rejoice in truth and charity in dealing with people of other faiths. The intention of Pastor Jones and his supporters is the exact opposite that deprives spirituality of its essence.
Posted: 17 Sep 2010 05:04 AM PDT
Federal Territories and Urban Wellbeing Minister Datuk Raja Nong Chik Raja Zainal Abdin confirmed the Cabinet's decision to change the song. Inatext message to StarMetro, Raja Nong Chik said the FT song would be changed by the next Federal Territories Day as decided by the Cabinet. "The lyrics will be in line with the 1Malaysia concept and more upbeat as the present anthem is too slow," he said.
Labuan MP Datuk Yussof Mahal also agreed that the current song was too slow. "It does not raise the spirit of the Federal Territories. We need something more up-beat that is suitable for the current generation,'' he said.
"The FT anthem isarespected emblem of the city and should reflect the values ofacity. If its lyrics no longer reflect that values then by all means make the changes otherwise why change it,'' said Segambut MP Lim Lip Eng. Lim added that the FT song was notafashion statement that could be changed as and when the need arose.
"What ever for? The song holdsaspecial meaning for the people of KL. It inculcatesasense of belonging with the residents and gives them something to be proud of,'' she said. "This is also disrespectful to the previous Agong and it speaks volumes on how Kuala Lumpur and its residents are being treated,'' Nurul Izzah added. Batu MP Tian Chua said: "One should not play around with something as respected as the anthem or the flag. "I find this news appalling,'' Chua said. Kepong MP Dr Tan Seng Giaw said any changes to the FT song must get feedback from the people of the Federal Territories. "Have they sought their views on this? Tan asked. "If the lyrics are not meaningful or the music not nice, then get the people to provide feedback on it. Why the hurry to change,'' Tan asked.
Teacher Sulaiman Yaaob said the song Maju dan Sejahtera heldadeep meaning for him as it had been sung in his school in Keramat for the past four years. "It provided us withadeep sense of belonging and I do not think it isagood idea to change it now after four years,'' he said. Student Tan Hui Ling of SMK Sri Sinar in Segambut said they had already learnt the song by heart and it would beahassle to learnanew one. "Maybe the authorities can change the beat or tempo like what they did with the Negaraku,'' she said.
The FT anthem was composed by Datuk Wah Idris, the man behind the current version of the Negaraku and Commonwealth Games 1998 theme song Standing in the Eyes of the World. The song's lyrics written by Sheikh Faisal Mansor projects the hope and aspiration of the people. It was first used by the Federal Territories contingent at Sukma XI in Kedah in 2006. When contacted, Wah Idris said the FT anthem wasarespected element that should not be changed every two to three years. "Everyone is entitled to their views but one should not make changes especially when it concerns national anthems. "If they feel that the song is too slow then they should come back to me and changes can be made. "Careful thought was given to the FT anthem and the melody and the tune should be maintained,'' Wah Idris said.
Segambut MP Lim Lip Eng said the traffic lights were installed by the Kuala Lumpur City Hall (DBKL) three months ago without consulting the residents. He added that last week during the testing of the traffic lights, there wasahuge backlog spilling into Jalan Duta from Jalan Segambut Pusat and Jalan Segambut. "Despite that, the traffic lights became functional this week and there are many unhappy people here because it takes more time to get to their destinations," he said duringapress conference on Friday. He said he would bring the matter to Kuala Lumpur mayor Datuk Seri Ahmad Fuad Ismail's attention.
Businessman Liew Way Mun, who operates an auto parts shop in Jalan Segambut Selatan, said it now took him 45 minutes to get to his shop from Jalan Segambut when previously it took less than 10 minutes before the traffic lights started operating. "There is alsoaproblem getting back to Jalan Segambut from my office. Last time it took me only three minutes but now I am stuck for almost half an hour," he said.
Another businessman said the traffic lights were not solving any traffic problems but only causing more frustration among motorists. "Before it was operational we did not think it would beaproblem but now I must say it is madness. DBKL should have conductedaproper traffic study before deciding on this," he said.
Christopher Ong, 52, who lives in Taman Segambut Hilir said the traffic lights wasagood idea because it was much easier for him to get out of Jalan Segambut Tengah to Jalan Segambut Pusat. "It is difficult to get out of Jalan Segambut Tengah without the traffic lights. Sometimes it took me 10 minutes just to leave the junction because motorists in Jalan Segambut Pusat would not give usachance to turn out," he said.
"O People, lend me an attentive ear, for I know not whether after this year, I shall ever be amongst you again. Therefore listen to what I am saying to you very carefully and take these words to those who could be present here today.
ALLAH has forbidden you to take usury (interest), therefore all interest obligation shall henceforth be waived. Your capital, however, is yours to keep. You will neither inflict nor suffer any inequity. Allah has Judged that there shall be no interest and that all the interest due to Abbas ibn 'Abd'al Muttalib (Prophet's uncle) shall henceforth be waived…